७० करोड मिलेर खाएको हो फाइल कता गाएब भयो ? :प्रचण्ड
नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७० करोड रुपियाँ बार्गेनिङ काण्डमा नेता गोकुल बास्कोटालाई संरक्षण गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । परिवारवादमा फँसेको भन्दै ओलीले प्रचण्डमाथि
कडा प्रहार गरिरहेको बेला प्रचण्डले जवाफ फर्काउँदै बास्कोटालाई संरक्षण गरेको प्रश्न उठाएका हुन् । प्रचण्डले भने, ‘७० करोड खानेहरूलाई उसले खाएकै होइन भन्दै जोगाउने को हो ? देश कोरोनाको महामारीमा परेका बेला त्यसको
औषधिमासमेत भ्रष्टाचार गर्नेलाई संरक्षण गर्ने को हो ?’ आफूले जनयुद्धको र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गरेंको, लामो आन्दोलनमा आफ्ना छोराछोरी अरु सरह लडेको तर्क गर्दै उनले सोही कारण उनीहरू जनताबाट चुनिएको
जिकिर गरे । तर, ओलीले जसरी धर्म छोराछोरी पालेर भ्रष्टाचारको पक्षपोषण नगरेको प्रचण्डको तर्क छ । आन्दोलनमा लडेर आफू र आफ्ना परिवारले गल्ती नगरेको कुरामा उनले जोड दिएका थिए । आफ्नो परिवारका सदस्यमाथि ओलीले
निरन्तर आक्रमण गरेको बताउँदै उनले ओलीको अत्याचार नसहने बताए । प्रचण्डले आवश्यक परे प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने चेतावनी पनि दिए । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेको
उनको भनाई छ । आफूहरुलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक गर्ने अधिकार संविधानले दिएको भन्दै प्रचण्डले यस्तो चेतावनी दिएका हुन । प्रचण्डले भने, ‘जरुरी पर्‍यो भने हामी संसद् बैठक बोलाउने छौं, त्यो अधिकार हामीलाई संविधानले दिएको छ ।’
प्रकाशित मिति January 30, 2021